DFKMG ah oo ku eedeysay beesha caalamka in Soomaaliya la dayacay la iskana indho tiray – SBC
DFKMG ah oo ku eedeysay beesha caalamka in Soomaaliya la dayacay la iskana indho tiray
Wasiirka arimaha dibada DFKMG ah ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Oomaar ayaa si kulul ugu dhaliilay beesha caalamka in Soomaaliya la dayacay oo la iska ilaaway, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in la dagaalanka burcad badeeda aanu ku ekaan badda ee loo baahan yahay in dhulkana lagala diriro.
Isagoo ka hadlayey shirweynaha caalamiga ah ee la dagaalanka burcad badeeda ee ka soconaya magaalada Dubai ee wadanka isu taga Imaaradka Carabta ayuu Mr. Oomaar wuxuu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay dareemayaan in la dayacay oo la iska ilaaway.
Mohammed Abdullahi Omar wuxuu shirka ka sheegay in dunidu ku guuldareysatey inay ka caawiso Soomaalida soo celinta amaanka iyo xasiloonida, isla markaana aan la siin taageerada & faragalinta lagu sameeyey wadamada Afgaanistaan, Ciraaq, Liibiya & Ivory Coast .
Wasiirku wuxuu ugu baaqay wadamada caalamka in si deg deg oo waliba muhiim ah ay u maalgaliyeen ciidamada amaanka Soomaaliya si ay u caawiyaan dawlada KMG ah ee Soomaaliya si buu yiri ay ugu guuleysto dib u soo celinta amaanka.
“Waxaynu doonaynaan inaan ka raaridno beesha caalamka sidii ay dawlad ahaan aynu ula dagaalami laheyn burcad badeeda”.
“Dadka Soomaaliyeed waxay rumaysan yihiin in dunidu ku eeganayso dagaalka dabada dheeraday ee sokeeye iyo dhimashada sii kordhaysa taasi oo aan rumaysnaysnahay inay tahay gumaad” ayuu yiri Wasiirka arimaha dibada DFKMG ah ee Soomaaliya.
Maxamed C/laahi Oomaar wuxuu si kulul u eedeeyey shirkadaha iska leh maraakiibta ee lacagaha madaxfurashada ee malaayiinta doolar gaaraysa siinaya kooxaha shufto badeeda, isagoo tusaale u soo qaatey in 4 milyan oo doolar hal markab madaxfurasho ahaan burcad badeeda loo siiyey.
“Dawlada Soomaaliya waxay gabi ahaanba ka soo horjeeda oo ay u diidan tahay sida ugu culus bixinta lacagaha madaxfurashada” ayuu yiri Oomaar.
“Aduunyadu waxay u muuqataa inay ka jawaabaysa oo kaliya wax ka qabashada burcad badeeda iyadoo iska indho tiraysa inay si toos ah talaabo uga qaado xaaaldaha kale ee la xiriira amaanka wadanka, taasi waxay niyad dil ku tahay shacabka Soomaaliyeed” ayuu hadalkiisa sii raaciyey Mohamed Cabdulaahi Oomaar.